Sida looga fogaado isbeddelka cimilada: talooyinka ugu fiican | Dib-u-cusboonaysiinta Cagaaran
Sida looga fogaado isbedelka cimilada
Isbeddelka cimiladu waa dhibaatada ugu weyn ee aadanaha soo food saartay qarnigan. Cimilkeenu wuu is beddelayaa oo waxaa la socda dhammaan doorsoomayaasha saadaasha hawada iyo qaababka jawiga. Sababaha ugu waaweyn ee isbeddelkan cimiladu waxa ugu badan aadamaha. Dhaqdhaqaaqyada dhaqaalaha bini'aadamka ayaa sii kordheysa hoos u dhigaya waxayna burburinayaan nidaamka deegaanka dabiiciga ah. Mid kastaa qof ahaan wuxuu qaadi karaa tallaabooyin kala duwan si uu uga hortago in tani ay sii korodho. Dad badan ayaa yaabban sida looga fogaado isbedelka cimilada.
Sidaa darteed, waxaan ka wada hadalnaa tilmaamaha ugu fiican ee lagu baranayo sida looga fogaado isbeddelka cimilada.
1 Tallaabooyinka lagu baranayo sida looga fogaado isbeddelka cimilada
1.1 Waxay yaraysaa qiiqa
1.2 Keydso tamarta
1.3 Qalabka xakamaynta
1.4 Ku beddel nalalka LED
1.5 Sida looga fogaado isbedelka cimilada by dib u warshadaynta
1.6 Baakad yar
1.7 Hagaajinta cuntada
1.8 Iskaa wax u qabso
1.9 Isticmaal biyo kulul oo yar iyo taageero dib loo cusboonaysiin karo
Tallaabooyinka lagu baranayo sida looga fogaado isbeddelka cimilada
Waxay yaraysaa qiiqa
Haddii aad rabto inaad si firfircoon uga qayb qaadato dagaalka ka dhanka ah isbeddelka cimilada, u isticmaal baabuurkaaga si dhexdhexaad ah. Isticmaal gaadiid waara sida ugu badan ee suurtogalka ah, sida baaskiilada ama isticmaal gaadiid dadweyne oo badan. Marka la eego masaafada dheer, waxa ugu waara waa tareenada, iyo ka sarreeya diyaaradaha, waxay mas'uul ka tahay qayb weyn oo ka mid ah qiiqa kaarboon dioxide ee jawiga. Haddii ay tahay inaad isticmaasho baabuur, Maskaxda ku hay in kiiloomitir kasta oo aad dedejiso ay kordhiso CO2 kharashkuna aad buu u badan yahay. Litir kasta oo shidaal ah oo baabuurku isticmaalo waxa ay ka dhigan tahay 2,5 kiiloogaraam oo kaarboon laba ogsaydh ah oo hawada ku sii daaya.
Tilmaamo yar oo yar oo guriga ah waxaan ku baran karnaa sida looga fogaado isbeddelka cimilada annaga oo badbaadinayna tamarta. Aan aragno waxay yihiin tilmaamahaas:
Ha kaga tagin TV-gaga iyo kombayutarka qaab heegan ah. Telefishinku wuxuu shidmaa saddex saacadood maalintii (celcelis ahaan, reer Yurub waxay daawadaan telefiishanka) wuxuuna heegan ku jiraa 21 saacadood ee soo hadhay, isagoo qaadanaya 40% wadarta tamarta habka heeganka ah.
Ha kaga tagin dabaysha mobaylka oo ku xidhan sahayda korontada mar kasta, xitaa haddii aan lagu xirin taleefanka, sababtoo ah waxay sii wadi doontaa isticmaalka tamarta.
Had iyo jeer hagaaji heerkulbeegga, ha ahaato kululaynta ama qaboojinta.
Ma ogtahay in adigoo si miyir leh oo masuuliyad leh u isticmaala qalabka korontada ee gurigaaga aad ka qayb qaadan karto la dagaalanka isbedelka cimilada? Waxaan ku siinaynaa xoogaa talooyin ah:
Dabool digsi halka karinta ay tahay hab fiican oo lagu badbaadiyo tamarta. Xitaa ka sii fiican waa makiinadaha cadaadiska iyo uumiga, kuwaas oo badbaadin kara 70% tamarta.
Isticmaal mashiinka weelka iyo mashiinka dharka lagu dhaqdo kaliya marka ay dhergaan. Haddii kale, isticmaal barnaamij gaaban. Looma baahna in la dejiyo heerkul sare, maadaama saabuunta hadda jirta ay waxtar u leedahay xitaa heerkulka hooseeya.
Recuerda que qaboojiyaha iyo qaboojiyayaashu waxay cuni doonaan tamar badan haddii ay u dhow yihiin dab ama kuleyliyaha. Haddii ay duqoobaan, dhalaal si xilliyo ah. Midka cusubi waxa uu leeyahay wareegga baraf-baxa oo toos ah kaas oo ku dhawaad ​​laba jeer ka waxtar badan. Ha dhigin cunto kulul ama diirran talaajadda: waxaad badbaadin doontaa tamarta haddii aad marka hore u ogolaato inay qaboojiso.
Ku beddel nalalka LED
Ku beddelashada nalalka caadiga ah ee nalalka tamarta badbaadinta badbaadi in ka badan 45 kiiloogaraam oo kaarboon dioxide ah sannad kasta. Dhab ahaantii, kan labaad waa ka qaalisan yahay, laakiin ka jaban noloshaada. Sida laga soo xigtay komishanka Yurub, mid iyaga ka mid ah ayaa dhimi kara biilka korontada ilaa 60 euro.
Sida looga fogaado isbedelka cimilada by dib u warshadaynta
Ujeeddada 3R waa in lagu fududeeyo dagaalka lagula jiro isbeddelka cimilada iyada oo loo marayo saddex fal:
Way ka yar tahay isticmaalka iyo waxtarka badan.
Isticmaal suuqa gacan-labaad si aad fursad kale u siisid waxyaalaha aanad isticmaalin ama aad ku hesho waxyaalo aanay dadka kale u baahnayn. Waxaad kaydsan doontaa lacag waxaadna awoodi doontaa inaad dhimato isticmaalka. Sidoo kale ku celceli xidhiidhka.
Dib u warshadaynta baakadaha, qashinka elektarooniga ah, iwm. Ma ogtahay in aad badbaadin karto in ka badan 730kg oo kaarboon laba ogsaydh ah sannadkii adiga oo dib u warshadaynaya kala badh qashinka ka soo baxa gurigaaga?
Dooro baakad yar: dhalada 1,5 litir waxay soo saartaa qashin ka yar dhalada 3 litir.
Markaad dukaamaysanayso, isticmaal bacaha dib loo isticmaali karo.
Iska ilaali inaad isticmaasho masaxaha qoyan iyo warqad aad u badan. Haddii aad dhimo qashinka 10%, waxaad ka fogaan kartaa qiiqa 1.100 kg ee carbon dioxide.
Cunto-carb-yar-yar macnaheedu waa cunista si caqli-gal ah iyo wax ka qabashada isbeddelka cimilada.
Iska yaree cunista hilibka -Xooluhu waxa ay ka mid yihiin wasakhda ugu wayn ee ku jirta jawiga -waxana ay kordhiyaan cunista khudaarta iyo khudaarta.
Iibso badeecadaha maxaliga ah iyo kuwa xilliyeed: Akhri calaamadaha oo isticmaal alaabada ka soo jeeda meesha u dhow si aad uga fogaato soo dejinta taas oo u malaynaysa qiiqa gaadiidka dheeraadka ah.
Sidoo kale isticmaal wax soo saarka xilliyeedka si aad uga fogaato habab kale oo wax soo saar oo aan waari karin.
Isku day inaad isticmaasho badeecooyin dabiici ah oo badan sababtoo ah sunta cayayaanka iyo kiimikooyinka kale oo yar ayaa loo isticmaalaa habka wax soo saarka.
Dagaalka ka dhanka ah isbedelka cimilada, ilaalinta kooxaha kaymaha waa in la raadiyaa:
Ka fogow dhaqamada keeni kara khatarta dabka, sida wax lagu dubo meelaha dabiiciga ah.
Haddii ay tahay in aad alwaax iibsato, ku sharad shahaado ama shaabad asal waara.
Geed beeran. Geed kastaa wuxuu nuugi karaa ilaa tan oo kaarboon dioxide ah, markaa waxaad ka caawin doontaa la dagaalanka isbedelka cimilada.
Isticmaal biyo kulul oo yar iyo taageero dib loo cusboonaysiin karo
Qadar badan oo tamar ah ayaa loo baahan yahay si loo kululeeyo biyaha. Kuwani waa qaar ka mid ah falalka lidka ku ah isbeddelka cimilada kuwaas oo sidoo kale kuu badbaadin doona lacag:
Ku rakib nidaamiyaha socodka biyaha qubeyska waxaadna ka fogaan doontaa qiiqa ka badan 100 kiilo ee carbon dioxide sannadkii.
Ku dhaq biyo qabow ama diiran waxaadna badbaadin doontaa 150 kiilo oo CO2 ah.
Waxaad kaydisaa biyaha kulul oo aad isticmaasho afar jeer tamar ka yar haddii aad qubeysato halkii aad qubaysan lahayd.
Demi qasabadda markaad cadayanayso.
Hubi in qasabadahaagu aanay daadan. Dhibicdu waxay lumin kartaa biyo ku filan oo ay ku buuxiyaan musqusha bil gudaheed.
Ugu dambeyntii, mid kale oo ka mid ah ficillada lagula dagaallamayo isbeddelka cimilada oo aad sameyn karto waa inaad doorato tamar cagaaran oo aad kor u qaaddo jiilka tamarta dib loo cusboonaysiin karo sida qorraxda, dabaysha, hydraulic, iwm.
Waxaan rajeynayaa in talooyinkan aad wax badan ka baran karto sida looga fogaado isbeddelka cimilada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Deegaanka » Sida looga fogaado isbedelka cimilada